Umzi-mveliso we-Emi emc we-foam gasket, owenziwe eTshayina-Dongguan Taikun Precision Materials Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Izinto eziqhubayo > I-EMI gasket > Emi emc ugwebu gasket
Emi emc ugwebu gasket
igwebu conductive, igwebu ezizodwa-ezimilise conductive, ukugqobhoza amagwebu conductive, amagwebu conductive, imizobo ngokwezifiso.Amagama aphambili:I-Emi emc i-foam gasket, iWholeyili, iFactory, abavelisi, Yenziwe eTshayina
Igama lemveliso:igwebu conductive, igwebu ezizodwa-ezimilise conductive, ukugqobhoza amagwebu conductive, amagwebu conductive, imizobo ngokwezifiso.
Inkcazo:ubude, ububanzi kunye nokuphakama, i-punch ekhethekileyo-ezimilise Customized ngokwemizobo yabathengi.
Umsebenzi:i-conductive, ikhusela, i-shockproof kunye nokufunxa ukothuka.
Usebenzisa:Ukhuseleko lwe-electromagnetic, iisekethe eziguquguqukayo, izikhululo ezisisiseko, i-chassis yombane, izixhobo zombane, izixhobo zamashishini, iimveliso zombane, izixhobo zonxibelelwano ngeselula;
Izinto:ilaphu eliqhubayo + ugwebu + iglu eqhubayo + iphepha lokukhulula
Imbonakalo:Umphezulu ugudile, unentsimbi ekhazimlayo kwaye ngokusisiseko unombala ofanayo;
(1) Ibhendi yefrikhwensi yokukhusela yile: 10kHz-30GHz.
(2) Impembelelo yokukhusela yile: ukukhusela ngokufanelekileyo imitha ye-electromagnetic, kwaye ixabiso lokukhusela lifikelela kwi-99.9999 (%).
(3) Ukuqhuba kakuhle kunye nefuthe lokukhusela.
(4) Ukuqhuba kakuhle kwe-thermal.
(5) I-ductility elungileyo.
(6) Easy extrusion processing.
(7) Ukumelana nokugqwesa okulungileyo kunye nokumelana nemozulu.
(8) Ukusebenza kakuhle kwe-anti-friction, amaxesha achasene ne-friction anokufikelela kumaxesha angama-5,000,000.
(2) Isetyenziswa ngokubanzi ukwenza i-RFID i-wallets yokulwa nobusela, abanini bamakhadi, iipokotho zangaphandle, ii-passport covers, njl njl kunye nezinye iimveliso.
(3) Ukukhusela okusebenzayo kwee-electromagnetics: ezifana neziko lemizi-mveliso, unxibelelwano oluphathwayo, iikhomputha, izixhobo zasekhaya, izikhululo zothutho, izixhobo zonyango kunye namanye amashishini emitha yemitha ye-electromagnetic. Ithatha indawo yepleyiti yobhedu kunye nepleyiti ekhokelayo ukwenza igumbi lokukhusela i-electromagnetic high-frequency, elifikelelekayo, elilula ukulenza kunye nesiphumo esihle sokukhusela.
(4) Isetyenziselwa ukukhusela i-electromagnetic level ephezulu: efana nokulawula uphazamiseko lwe-electromagnetic endaweni, ukuthintela ukuvuza kolwazi lwe-elektroniki, kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lolwazi; ilungele imisebenzi yasendle, ukhuseleko lombane kunye nezinye iimfuno.
(5) Isetyenziselwa ngokubanzi ukwenza i-RFID i-wallets yokulwa nobusela, abanini bamakhadi, iipokotho zangaphandle, abanini bepaspoti, njl.